Indlela ukukhetha umsebenzi? Lo mbuzo iyinkimbinkimbi, futhi impendulo ngokushesha noma kamuva, yonke intsha ifuna.
Kuyinto imfihlo ukuthi kukhethwa ubuthishela - lokhu ingenye izinyathelo ezibalulekile kakhulu ekuphileni awo wonke umuntu. Phela, ikhambi esifanele bayokusiza ukuba uhlakulele, ngaleyo ndlela ethola iholo ngomsebenzi. Kubalulekile futhi ukuthi umsebenzi awuzange ikhokhwe kuphela, kodwa futhi uthande, kwakujabulisa bekhuthaza self-ukuthuthukiswa.
Ngisho nasezimweni ezikhululekile kungenzeka 9th grade esikoleni ecabanga okuningi umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho. Indlela ukukhetha umsebenzi enkathini ezinjengalesi lapho zisencane? Kungani ku grade 9? Ekupheleni kwalo nyaka ka umfundi cwaningo sinikezwe kuqala leli thuba ukuba ungenele isikole lobuchwepheshe noma ekolishi futhi uqhubeke nokufunda. Ngakho-ke, ungakwazi ngalesi sikhathi zikwazi lokho ukuze zifunde lezo zinto eyokusiza emsebenzini wakho esikhathini esizayo, futhi kuphindelelwa nakwamadala.
Uma uke yanquma okwamanje ukuthi yini engifuna, ungaqhubeka ukutadisha kuze kufinyelele ebangeni 11. Ngemva kokuphela grade 11 isivele kudingekile ukwenza isinqumo esiwujuqu mayelana yini okufanele uyenze ngokulandelayo: ukuya eyunivesithi, ukuya ku-isifundo bandulo noma okunye ukuyofuna umsebenzi. Kunengqondo, lutho kuyinkimbinkimbi. Kodwa hhayi abafundi abaningi kungaba ukuthola indlela ukukhetha umsebenzi, uma uthatha isinqumo esifanele. Yiqiniso, abanye abafundi namanje esikoleni abanentshisekelo yezihloko ezithile kakhudlwana kunamanye, futhi ukwazi ukuthi zinikelwe kangcono. Abafundi abanjalo lula ukukhetha umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho. Kodwa iningi labafundi wenze lokhu kube nzima nakakhulu. Kulokhu, njengoba umthetho, bona Basizwa abazali. Njengoba masinyane njengoba they ukuzwa kusuka ibinzana ingane yabo: "esiza ukuchaza umsebenzi", - izinkinga ukuqala ngaso sonke. Nokho, uma abazali kungaba ukusekela kahle ingane yakho ukuthi inyuvesi kufanele yenzeni futhi yini ubuhlakani ukukhetha, kuyilapho ukulalela umbono wakhe, futhi kucatshangelwa izifiso ngangokusemandleni akhe.
Ngokuvamile, ngeshwa, abazali banquma bebodwa, sithembele uthando noma amaphupho abo zingafezeki, baphoqwa ukuba ukufundisa umntwana ukuthi ngokuphelele akudingekile noma ezithakazelisayo. Kubalulekile ukuthi ingane ukulalela iseluleko sabazali kodwa ngesikhathi esifanayo lokuthi kangikubulalanga wamathalenta nje ngoba umkhakha kubonakala unpromising. Abantu abaningi abasha ukhethe umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho ukuvelela zindlela. Ngesikhathi esifanayo abangayilindele umthamo wayo, ngoba uthola iholo elikhulu - akusho ukusebenza kancane.
Phakathi kakhulu likufuna ochwepheshe zisekhona ezemfundo, wezokwelapha kanye ubunjiniyela okukhethekile, ngakho intsha kufanele sinake amanyuvesi abasinikezayo. Nokho, awukwazi ukukhetha imfundo ezinye kuphela ngenxa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo: kubalulekile ukuthi uchwepheshe esizayo kwadingeka abathile ukuthambekela namakhono.
Ngokuvamile intsha ukhethe uthisha imfundo ngenxa iholide elikhulu ehlobo kanye zokusebenza day iDemo, bengabheki mayelana wamaphepha, isikhathi esengeziwe umthwalo, nezinye ezicashile mkhakha. Abantu bayathanda elula izibalo esikoleni, iya ku ukufunda isayensi yezibalo neminyango, lapho elinde lenqwaba izifundo ungakujabulisi, akazange okuyinto cha khuza them. Ezimweni ezinjalo, izifundo noma umsebenzi ikusasa elikuphethe imizwelo engakhi kuphela.
Ngakho, iziqu, ngaphambi kokuba sikhethe profession esizayo, kufanele ahlole ngokucophelela zonke izici zaso ezicashile, ukuthola ukuthi yini kumelwe enze kuleli noma isikhundla. Indlela ukukhetha umsebenzi? Buza Ochwepheshe endaweni ekhethiwe ubuchwepheshe, uthole ukuthi yini ulindelwe esikhathini esizayo? Sicela ukukala ikhono lakho: kusenjalo kuzoba nzima kakhulu kimi ukubhekana imisebenzi umsebenzi ngomsebenzi owenziweko ukhangwa? Lapho ekhetha umsebenzi kudingeka afune nasesikhathini esikude esizayo nokuba ucabangisise "kochwepheshe" futhi "nebubi." Kukhona iziqondiso eziningi ku "Indlela unquma umsebenzi", ukuhlolwa, uphendula imibuzo engatholwa evumelana nawe umhlabeleli. Ekugcineni, kungcono ukuba ukhethe umsebenzi ngokuzimela. Kuyinto - ukukhetha wokuphila, futhi kuba efiselekayo ngilifeze unomphela!
Female umkhosi: imfundo, umsebenzi, amalungelo nemisebenzi
Ikhomphyutha ayiboni ikhibhodi - kufanele ngenzeni?
Ukugcina amanethiwekhi computer kanye nezinhlelo - kuyini?
Isimo sokudlala kwezingane ekufundiseni inkulisa kanye nesikole